Shiinaha raglan gacmo-gacmeed loogu talagalay ragga warshad iyo soo saarayaasha | Dufiest
gacmo-gacmeedka raggalan ee ragga
CVC 60/40, T / C 60 / 40，100% caag
Hoodada jiinyeerka ee 'hopper' waa mid aad u qurux badan oo raaxo u leh guriga iyo socodka oo aan ku iibinno annaga qiimaha jumladaha. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiilku waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track jackets and bottom, T-shirt, Tank top and fit calim dress.
Nimankeena jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa sifiican u qaabeyn doona qaabkaaga gaarka ah. Iyada oo la adeegsanayo naqshad cusub ama shakhsi ahaaneed oo ku saabsan jilicsanaanta caatada ah iyo dhogorta waarta, tani waxay noqon doontaa zip cusub oo aad jeceshahay ilaa hoodie.
Koodhka daboolka leh waa nooc aad caan u ah naqshadaha noocyo badan oo isboorti ah, si loogu oggolaado macaamiisha intiisa badani inay si fiican u fahmaan iswaafajinta alaabooyinka noocaas ah. Warqadani waxay sharraxeysaa astaamaha u dhigma ee Coat Hooded, taas oo ka dhigaysa astaamaha shaqeynaya ee dharka noocan ah inay si fiican u muuqdaan. Dhexdooda, tan ugu caansan waa dhibaatada koofiyadda. Si loo muujiyo wanaag iyo raaxo, waxaa muhiim ah in la isku duwo koofiyadda. Dad badan ayaa dareemi doona in koofiyaddu tahay mid aad u badan, haddii aad si buuxda uga faa'iideysan karto marka aad is barbar dhigayso, dareenka ugu dambeeya ee xirashada ayaa si weyn loo horumarin doonaa.
Hore: Dharka bannaanka ee Ladie ee jiinyeerka hoodie
Xiga: jaakad jiinyeer hoodie jiinyeer jiinis loogu talagalay dumarka